जाजरकोट घ’टनाबारे महानायकले भने नवराज विकको ह’त्याले मलाई स्त’ब्ध र आ’क्रो’शित बनायो, असमानता किन? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/जाजरकोट घ’टनाबारे महानायकले भने नवराज विकको ह’त्याले मलाई स्त’ब्ध र आ’क्रो’शित बनायो, असमानता किन?
जाजरकोट घ’टनाबारे महानायकले भने नवराज विकको ह’त्याले मलाई स्त’ब्ध र आ’क्रो’शित बनायो, असमानता किन?
रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा शनिबार भएको घ’टनामा मृ’तक सबैको टा’उको च’ोट देखिएको छ। बिहीबारसम्म फेला परेका पाँचजना मृ’तकको टाउकोमा चो’ट लागेको पाइएको हो।बे’पताको खोजी र उद्धारमा ख’टिएका स्थानीयले फेला परेका सबै श’वमा टाउ’कोमा चो’ट रहेको बताएका छन्।
घट’नामा बेपत्ता भएका थप एकजना बिहीबार मृ’त अवस्थामा फेला परेका छन्। भेरी नगरपालिका ४ खलंगाका १९ वर्षीय सञ्जु विकको श’व घ’टनास्थलदेखि करिब ४० किलोमिटर जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका १३ कालाभुर नजिक भेरी नदीको खोचमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठले बताए।
टा’उकोमा चो’ट लागेको अवस्थामा स्थानीयले सञ्जुको श’व भेरी नदीमा फेला पारेका थिए। खोजीमा संलग्न भेरी नगरपालिका ११ का मुक्ति आचार्यले श’वको टाउको कु’च्चि’एको र अण्’डको’ष सु’निएको अवस्थामा फेला परेको बताए।
त्यस्तै यस घ’टनाबारे महानायकले भने नवराज वि’कको ह’त्याले मलाई स्त’ब्ध र आ’क्रोशित बनायो,अस’मानता किन? किन भन्दै आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सार्बजनिक गरेका छन् हेरौ भिडियो :
१६ बर्षमै अपहरण गरि अरुको विभत्स तरिकाले ज्यान लिने दिलिप को हुन ? भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस